Antsirabe-Mercy Ships : olona valo hiatrika fandidiana any Toamasina. | NewsMada
Antsirabe-Mercy Ships : olona valo hiatrika fandidiana any Toamasina.
Ho an’i Vakinankaratra, mahatratra 146 ny olona manana tsy fahatomombanana ara-batana hiatrika fandidiana any amin’ilay sambo hopitaly Mercy Ships miantsona ao amin’ny seranan-tsambo ao Toamasina, amin’izao fotoana izao. Amin’ireo 146, olona 10 efa lasa any Toamasina. Ny marary roa voalohany nanainga ny volana novambra , ny valo hafa kosa niala tao Antsirabe ny alatsinainy lasa teo.
Nanatrika ny fiaingan’izy ireo tao amin’ny tokotanin’ny Résidence-n’ny Préfecture Antsirabe, ny lehiben’ny faritra, Andriamanjaka Mandrindra Albert, ny prefet ao Antsirabe, Andriatomponera Voahangiarimino ary ny sekretera jeneralin’ny orinasa Socota.
Ny groupe Socota no miantoka tanteraka ny saran-dalana mandroso sy miverina ary ny sakafon’ny marary mandritra ny fotoana hijanonana any Toamasina. Ny faritra Vakinankaratra sy ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka no nanatanteraka ny fanamorana rehetra ny fitiliana ny marary, ny fandrindrana mikasika ny fandehanan’ireo olona hiatrika fitsaboana.
Miankina amin’ny fahatongavan’ny dokotera amerikanina manam-pahaizana manokana avy amin’ny MercyShips ao Toamasina ny fandehanan’ireto olona hiatrika fitsaboana.